थपिए कोरोनाका लक्षण, अब यी समस्या देखिए चनाखो बन्नुस् ! – Makalukhabar.com
२०७७ असार २३, मंगलवार १८:४२
थपिए कोरोनाका लक्षण, अब यी समस्या देखिए चनाखो बन्नुस् !
मकालु खबर	 २०७७ असार १३ गते प्रकाशित 284 0
काठमाडौं । हाम्रो देशमा कोभिड-१९ संक्रमण भए, नभएको जाँच्न ज्वरो नापिन्थ्यो। सास फेर्न गाह्रो भए, नभएको पहिल्याइन्थ्यो। र, रुघाखोकी हेरिन्थ्यो। यसको उपचारमा निरन्तर खटिएका चिकित्सक र विशेषज्ञले उक्त रोगको लक्षण थपिँदै गएको पाएका छन्।
नयाँ लक्षण के-के देखा परे भन्ने सम्बन्धमा सबै अस्पतालले फारम भरेर पठाएपछि थाहा हुने डा. पाण्डेले बताए। ‘कोरोना संक्रमणकै कारण स्वादमा कमी आउने, श्रवण शक्तिमा ह्रास आउने हो वा अन्य कारण हुन् भन्नेबारे सबै अस्पतालले लक्षणसहितको फारम पठाएपछि खुल्नेछ’, उनले भने। –अन्नपूर्णबाट
कोरोना संक्रमितको संख्या ९९ लाख नाघ्यो, कति भए निको ?